အတတ်ပညာ China New design four spindle ATC wood cnc router စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |JCUT
1. စျေးနှုန်းသည်အတော်လေးနိမ့်သည်- အသေးစားနှင့်အလတ်စားပရိဘောဂစက်ရုံများအတွက်သင့်လျော်သည်။high-end 12-30,000 လေးဆင့်စီစဥ် CNC blanking machine သည် drill bag ပါသော model နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက စျေးနှုန်းအတော်လေးသက်သာပါသည်။ငွေကြေးဖိအားအတော်လေးကြီးမားသော ပရိဘောဂစက်ရုံများအတွက် ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
2. Door panel Cabinet နှစ်ခုအသုံးပြုမှု- ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအမြင်အရ၊ လုပ်ငန်းစဉ်လေးခုသည် pneumatic switching ဖြင့် tool change function ကိုနားလည်ရန် spindles လေးခုကိုအသုံးပြုသည့် ရိုးရှင်းသော tool changer model မှပါဝင်ပါသည်။ကက်ဘိနက်ကိုယ်ထည်သည် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အပေါက်ဖောက်ခြင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး ရိုးရှင်းသောတံခါးကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
3. ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု- အတန်းတူးဖော်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစင်တာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ လုပ်ငန်းစဉ်လေးခုဖြတ်တောက်ခြင်းစက်၏လည်ပတ်မှုသည်အတော်လေးရိုးရှင်းပြီးလေ့လာရလွယ်ကူပြီး ပင်မရိုးတံတစ်ခုပျက်သွားသည်နှင့်၊ စက်ကိရိယာများသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်တူးဖော်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။ ပင်မရိုးတံသုံးခု။
1. အလိုအလျောက်အမှာစာဖယ်ရှားခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ ကျင်းများ၊ အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များကို တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ပြီးမြောက်စေသည်။လုပ်ငန်းစဉ်လေးခု blanking စက်၊ လေးဆင့် blanking စက်၏ အားသာချက်များ၊ CNC blanking စက်။
2. သစ်သားတံခါးနှင့် ပရိဘောဂအလှဆင်လုပ်ငန်း- အစိုင်အခဲသစ်သားနှင့် ပေါင်းစပ်တံခါး၊ ကက်ဘိနက်တံခါး၊ ဧရိယာကျယ်ဝန်းသော ပန်းကန်ပြားလေယာဉ်ထွင်းခြင်း၊ အစိုင်အခဲသစ်သားထွင်းထုခြင်းနှင့် ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ panel ပရိဘောဂထွင်းခြင်း၊ ရှေးဟောင်းမဟော်ဂနီ ပရိဘောဂများထွင်းထုခြင်း၊ အစိုင်အခဲသစ်သားအနုပညာ နံရံဆေးရေးပန်းချီနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ။
3. သစ်သားလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း- နာရီဘောင်များ၊ လက်မှုဓာတ်ပုံဘောင်များ၊ ပါးလွှာသော အလူမီနီယမ်ပြား လက်မှုလက်ရာနှင့် ထွင်းထုခြင်း၊ လျှပ်စစ်ပွဲများ၊ အားကစားပစ္စည်းများ။လုပ်ငန်းစဉ်လေးခု blanking စက်၊ လေးဆင့် blanking စက်၏ အားသာချက်များ၊ CNC blanking စက်။
4. အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း- ဆားကစ်ဘုတ်များ၊ လျှပ်ကာပစ္စည်းများ၊ LED ပြကွက်များ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ (ရောင်စုံတီဗွီများ၊ အဝတ်လျှော်စက်များ၊ ရေခဲသေတ္တာများ) ခွံများ သို့မဟုတ် မော်ဒယ်များ။
5. ဂီတတူရိယာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း- သုံးဖက်မြင် အကွေးအဆန့် မျက်နှာပြင်ကို ထွင်းထုခြင်းနှင့် ကြီးမားသော တယောပြားများနှင့် ခေါင်းများကို ထွင်းထုခြင်းနှင့် ကြိတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ဂီတတူရိယာများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ဖြတ်တောက်ခြင်း။
Longteng တတိယမျိုးဆက် လုပ်ငန်းစဉ်လေးခု R4- မြန်နှုန်းဖြတ်စက်ကိရိယာများ
အလုပ်ဧရိယာ (S*Y*Z) 1220*2440*200mm (အရှည် 2800 စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်)
Tool မဂ္ဂဇင်း 6KW*4
မော်တော် Leadshine Big Power 1500w ဆာဗာမော်တာ
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် ထိုင်ဝမ် LNC MW2200 ထိန်းချုပ်မှုစနစ် တင်သွင်းခြင်း။
ဖုန်စုပ်စက်စားပွဲ မူပိုင်ခွင့် ဒီဇိုင်း 50MM စုပ်ယူနိုင်သော လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ PVC ပိုက်ချိတ်ဆက်မှု ကောင်းမွန်သော အလုံပိတ်၊ အပြေးဘုတ်မရှိ၊
စုပ်ယူစုပ်စက် ရေလည်ပတ်မှု 7.5KW၊ (အားကောင်းသော စုပ်ယူမှုစွမ်းအား၊ ထုတ်ကုန်များကို စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှု)
ဖုန်စုပ်စက် အိတ်နှစ်လုံးပါသော 5.5KW Dust Collector
အင်ဗာတာ။ လေးလုံးတွဲ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း၊ ကြိုတင်စတင်ပါ။
ဆလိုက်ဒါ မူရင်း 25 slinder စစ်စစ်
ခဲဝက်အူ TBI မူရင်း 2510 ခဲဝက်အူ
ကန့်သတ် သစ်သားဖြတ်တောက်သည့်ရောက်တာ၏ ရှေ့နှင့်နောက်ပြန်လှည့်ရန် ရည်စူးထားသည်။
တစ်ပွဲ မူရင်း HICK
လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ မူရင်း Chint စစ်စစ်
လျှော့စားပါ။ မူရင်း Modoli စစ်စစ်
ဆလင်ဒါ Huadeli (အရည်အသွေးကောင်းပြီး ခိုင်ခံ့သောကြာရှည်ခံမှု)
ယေဘုယျအသွင်အပြင် တတိယမျိုးဆက် Longteng မူပိုင်ခွင့်ဖွဲ့စည်းပုံ (လွတ်လပ်သောထိန်းချုပ်ရေးဝန်ကြီးအဖွဲ့)၊
အိပ်ယာဖွဲ့စည်းပုံ လေးလံသော ဇရာဂဟေကုတင် (ငါးမျက်နှာ ကြိတ်တူးဖော်ခြင်း တိကျမှု 0.02 မီလီမီတာ)
Gantry ထူထပ်သော နံရံစတုရန်းပြွန်နှင့် အလင်းတန်းအတွက် သံမဏိအကွက်များဖြင့် synchronous beam ကုတင်၏ ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ကော်လံ၏ တစ်သားတည်းသော ပုံသဏ္ဍာန်သည် အချိန်အကြာကြီး ပုံပျက်မသွားပါ။
Longteng မူပိုင်ခွင့်တင်ထားသော ကက်ဘိနက်စီးရီး၊ အပြည့်အ၀ အလုံပိတ်အသိဉာဏ်ရှိသော လည်ပတ်မှုဝန်ကြီးအဖွဲ့
အလိုအလျောက် ဖြုတ်ချခြင်း။ အလိုအလျောက် ဖြုတ်ချခြင်း။
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားနည်း Spindle အလိုအလျောက်အခန်းကန့်အမျိုးအစား ပေါင်းစပ်ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ဒုတိယဖုန်မှုန့်များကို pusher ဖြင့် ဖယ်ရှားခြင်း။
စုစုပေါင်းအလေးချိန် 2700 ကီလိုဂရမ်
ယခင်- 1212 ကြော်ငြာ cnc router mahcine
နောက်တစ်ခု: စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်လေးခု R4 သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
6090 Cnc Router Atc ပေးသွင်းသူများ
ကြော်ငြာ Mini Cnc Router ထုတ်လုပ်သူများ